The Soul Of FEELLiFE: Nikeza I 3rd Way Of nokushintsha kokudla nokufakwa Ukuze Human Beings
1. Surge® Frequency Ukuguqulwa Nebulization Technology
Futha ukuzivumelanisa ukuphefumula imvamisa ngokukhalipha. Izinga spray kanye nenani kungase kushintshwe ngokuvumelana ukuphefumula imvamisa lesiguli, ukwandisa izinga sebethule uketshezi kule wamaphaphu ezijulile. Omunye imvamisa ukuguqulwa nebulization kulingana ukuba nebulization imodi ubudala kathathu.
2. Technology Self-Ukuhlanza
Nedivaysi ezingasetshenziswa thela ucezu nebulizer ngokuzenzakalelayo lapho amandla-on. I nebulizer oyongena othomathikhi yokuhlanza Imodi uma zivulwa, futhi crank up amandla ukukhipha izidakamizwa asalile nge mkhulu umthelela force ekuqaleni 5 imizuzwana, ukunciphisa lo mkhuba izidakamizwa ukuvaleka.
3. Izinga lokushisa Control Induction Futhi Dry Burning Prevention Technology
Izinga lokushisa isilawuli lokungeniswa: i NTC lokungeniswa nebulizer. Nebulizer has a thermistor NTC elikwazi ukuzwa lokushisa isixazululo endebeni imithi, kuyoba ukwehlisa izinga lokushisa ngokuzenzakalelayo lapho izinga lokushisa ifinyelela 45 ℃, ikakhulukazi ukuvikela umsebenzi ketshezi.
Dry esivuthayo Prevention ubuchwepheshe: usebenzisa Ukushisa Curves bezwe noma ikhambi enqolobaneni liquid isiphelile. I nebulizer izovala phansi lapho lizwa ikhambi inqolobane liquid run out, ukuvikela ucezu nebulizer ekubeni libhujiswa esivuthayo ezomile.
4. Lithium Titanate Ibhethri System Powered
Nge okusezingeni eliphezulu lokushisa ukumelana, umsebenzi ukuqhuma-ubufakazi futhi ukusebenza high nokuphepha, inkokhiso kokukhwehlela ongafinyelela 3000 nowe, impilo sevisi kuze iminyaka 5.
5. Mesh® Nebulizer Piece Material Futhi Laser Abahle Punching Technology
Titanium ingxubevange nebulizer ucezu ongamelana ukugqwala, nge biocompatibility ezinhle, kwenza nebulization ephephile.
I perforation laser igcina ubukhulu Pore at 2.5um ± 25%, kwenza izinhlayiya spray obucayi xaxa, ukukhuphula izinga sebethule uketshezi kule wamaphaphu ezijulile, kwenza ukumuncwa izidakamizwa kanye kusebenta ube ngcono.